adminon May 19, 2020 Leave a Comment on BULUUQUL MARAAM PDF
Author: Tale Kajidal
Waxaa jira laba nin oo asaxaabo ahoo midkoodba arrintaa laga weriyey, oo midkood waxaa la yiraahaa Cabdullahi ibn Sarjis, magaam kalena waxaa la yiraahaa AlXakam ibn Camr al Qifaarii, — radiyal Laahu canhum- labadaa midkood inuu yahay ayey u eg tahay.
Laba mafsadood yaa lasoo gudbanaatay: Xadiiskan oo kale Abuu Saciid al Khudrii yaa isaguna weriyey oo waxaa laga helayaa:. In Rasuulkii Alle sallal Laahu calayhi wasallam bisadda uu ka yiri: Waxyaalahay ku andacoodaanna waxaa ka mid ah: Saas daraadeed, Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu amraayaa in la wada geliyo si ay u nasakhdo dawadaas baalka kale ku jirtaayu suntii baalka kale ku jirtey.
Markaa xayawaanaadka bad ku noosha ah gawrac uma baahna siday doontaba xalaal weeye kaasuna wuxuu la mid yahay Alle- subxaanahuu wa tacaalaa- markuu yiri: Kalamadahan oo kale waxaan ku bedelnay sida caadi ahaan loo qoro Af Soomaaliga: Biyahu hadday fara badan yihiinna xadiiskii Ibn Cumar baynu naraam marray iyada dhib malaha.
Haddiise biyuhu badan yihiin oo qullatayn iyo wixii ka badan ay yihiin oo nijaasadiina aynan doorinin ma nijaasoobayaan. Saddex kala dardaran bay ahaayeen oo kulligood daciif naraam wada ahaayeen. Oo amraayey inay wada dardarsadaan oo ay hareeraha ka joogsadaan.
Abii Saciid Al-Khudrii radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey in uu yiri: Xadiiskan riwaayada Abii Daawuudna marka iyadu saxiix weeyaan waxaa saxiix yeelay Shaykh Albaani: Search in Wajibad Search for: Imaamu Shaafici- radiyal Laahu canhu- isagoo masaladan ka hadlaaya buu sheegoo wuxuu yiri xadiiska masaladaa kusoo arooray jiritaankiisa ma sugayaan culumada xadiisku. Markaa biyihii fadhiyey ee uu byluuqul kaajay waa inaanu ku qabeysan.
Taasi waxay guluuqul inaan sidan u soomaaliyeyno:. Maydita Badda Maytadiisuna waa xalaal. Ibhaamkaasi xadiiska wax ma u dhimaayaa.? Inay markaa afka ka gasho ayaa u dhib yaraanaysa kolkuu wax cabbaayiyo kolkuu wax cunaayiyo kolkii isaga, markaasay calooshiisa gelaysaa, ukumihii sidaas ahaa.
Markaa Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- middii yarayd ayuu doortay oo ahayd inay kaadida nijaasta ahi meeshaa keliya ku koobnaato meeshiina la daahiriyo. Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu ka yiri: Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ].
Maadaama ay dikri tahayna sideeda mqraam loo adeegsado ayaa fiican.
Buluuqul Maraam Sh. Shariif Cabdi Nuur
Kitaab walba waxaa lagu soo aruuriyey xadiisyada la xidhiidha axkaamta shariicada. Rasuulkii Alle — sallal Laahu calayhi wasallam- badda ayuu wuxuu ka yiri: Abii Qataadah radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey: Xayawaan waliba meeshuu quwada ku leeyahay iyo meesha muhiimka ah ee uu daafacanayo waa garanayaa.
Xadiisku markaa wuxuu tusinayaa: Markaas Rasuulka- sallal Laahu calayhi wacalaa aalihii wasallam- hal xukun baa la weydiiyey laba xukun buuna ku jawaabay. Cinwaanadan qaarkood waa hadalkii sheekha oo aan soo qaadanay, qaarkoodna waa ku dheeraad hadalka sheekha. Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn.
Abii Umaamah al-Baahilii radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey in uu yiri: Sir Alle uu Rasuulkiisa ogeysiiyey yaa meesha iskaga jirta, markaa waxyaalaha kale ee mustaxdathaatka [la sameeyey] ehee sanaacaatka ihi wax la mid ahoo wax lagu nadiifiyaa wey jiri jireen berrigoodii hore, Ashnaan geed la yiraahiyo oo marxam lagu dhaqan jiriyo baa iska jira saabuunina waa jiri jirtey. Laakiin sida ugu fiicani waxa weeyaan kolba ninkii iyo haweenaydii hadday yihiin inay isla wada qabeystaan.
Af Soomaaliga la qoro iyo Af Soomaaliga dadka intooda badani ku hadlaan way kala gedisan yihiin, tanina mataam sababtay inaan isku dayno inaan waxoogaa yara hagaajino qoraalkii aan cajaladaha ka qornay anagoo yaranayna isbedel ku yimaada sheekha hadalkiisa.
Daciif weeye Ibn Xajar naftiisu maanu dhihine, dacfi baa ku jira buu yiri. Hadduu ey afka la galo weelkii oo uu afka geliyo markaas daahirinta la daahirinayaa waxa weeyaan inuu dhaqo todoba goor inuu dhaqo midda ugu horraysaayu ciid mid lagu daray ay tahay. Sidaas darteed waxaa dhacda inta badan in sheekhu aanu turjumin kalmadaha qaarkood ee uu carabi ku maro.
Masku waa kaad aragteen madaxa waa qarsanayaa kolkii la dilayo. Markay arrintu sidaa noqotay buu eygii najisul cayn sharcigu ka dhigay oo weelkii uu taabtay ee afka la galay sidaa in loo daahiriyo uu amray baa yaa waxay noqotay xikmada iyo sawaabta lagama maarmaanka ah bay noqotay.
Cinwaanadan qaarkood waa hadalkii sheekha oo aan soo qaadanay, qaarkoodna waa ku dheeraad hadalka sheekha. To find out more, including how to control cookies, see here: Wajibad waa ururiyaha qoraalada diiniga ah si ay dadka buuluuqul inay bartaan diintood ugu fududaato akhrinta iyo daabacaada qoraalada oo af-Somali iyo English ka kooban Inshaa Allaah hadan waxaan ku guda jirtaa si aan ugu soo kordhin lahayn qoraalada Carabiga ah.
Ibn Cabbaas radiyal Laahu canhumaa waxaa laga weriyey inuu yiri: Kalamadahan oo kale waxaan ku bedelnay sida caadi ahaan loo qoro Af Soomaaliga: